Happy Life: Fwd : ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ စာတိုများစုစည်းမှု ......
Fwd : ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ စာတိုများစုစည်းမှု ......
လူသားတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်သည် အံ့သြဖွယ် စွမ်းရည်များဖြင့် ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက် ထားပါသည်။ ထိုစွမ်းရည်များ ထဲမှ တစ်ခုသည် နာမကျန်း ဖြစ်နေပြီဆိုပါက ထိုအကြောင်းကို ခန္ဓာကိုယ်၏ အစိတ်ပိုင်း တစ်ခုခုက ပြသနေတတ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
နံနက်ခင်း မျက်နှာ သစ်ပြီးစ အချိန်တွင် လူသားတိုင်း တစ်ကြိမ်တော့ မှန်ကြည့် မိတတ် ကြပါသည်။ ထိုအချိန်မျိုးတွင် အချိန် အနည်းငယ်မျှ ပေး၍ ကြေးမုံပြင်တွင် ထင်ဟပ်နေသော မိမိတို့၏ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်း ပုံရိပ်များကို ကြည့်ရှု စစ်ဆေး ပေးခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရေး ယိုယွင်းလာမှု၏ အစောပိုင်း လက္ခဏာများကို သိမြင် လာနိုင်သည်ဟု ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ ပညာရှင်တို့ ဆိုကြပါသည်။ ထိုအချိန်မျိုးတွင် မိမိခန္ဓာကိုယ်မှ- (၁)လက်သည်း (၂)ချိုင်း (၃)မျက်ခွံ၊ ဒူးခေါင်းနှင့် တံတောင်ဆစ် (၄)ဦးရေပြား (၅)ဝမ်းဗိုက် (၆)လျှာ (၇)မျက်စိ တို့ကို ကြည့်ရှု စစ်ဆေး သင့်ကြောင်း ပညာရှင်တို့ အကြံပြု ထားပါသည်။
(၁)လက်သည်း လူသားတို့၏ အရေပြားတွင် ခုံးထနေသော မှဲ့များ တွေ့ရ တတ်ပါသည်။ ထိုမှဲ့များသည် အရေပြား ကင်ဆာ၏ ရှေးဦးသင်္ကေတ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မှဲ့ကင်ဆာသည် လက်သည်း၏ အောက်ဖက်တွင်လည်း ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။ လက်သည်းပေါ်မှ အဝါရောင်၊ အညိုရောင်၊ အမည်းရောင် အစင်းများသည် အရေပြားကင်ဆာ၏ ရှေးဦးပုံရိပ်ဖြစ် နေတတ်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ထိုအစင်းများသည် မှဲ့ကင်ဆာကြောင့် ဆဲလ်များ ထိခိုက် ပျက်စီးရာမှ ဖြစ်ပေါ်လာတတ် သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မှဲ့ကင်ဆာသည် အရေပြား ကင်ဆာများ ထဲတွင် အသေအပျောက် အများဆုံးသော ရောဂါ ဖြစ်သည်ဟု နယူးယောက် စီးတီးမှ အရေပြား အထူးကု ဒေါက်တာ အေရီအော့စတိက ဆိုပါသည်။ သို့ရာတွင် စောစီးစွာ သိရှိကုသ နိုင်ပါက ၉၅ရာခိုင်နှုန်းမှာ ပျောက်ကင်း နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် လက်သည်းများကို ကြည့်ရှု စစ်ဆေး ပေးခြင်းဖြင့် အထက်ပါ အချက်များကို စောစီးစွာ သိနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ လက်သည်းပေါ်တွင် အဖြူအစင်းများ ရှိနေပြီး ပင်ပန်း နွမ်းနယ်မှု ဒဏ်ကို ခန္ဓာကိုယ်က ခံစားနေရပြီ ဆိုပါက သတိထား သင့်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ထိုအချက်သည် ကျောက်ကပ်များ လုပ်ဆောင်မှု အားနည်းရာမှ ဖြစ်ပေါ် လာတတ်သော သင်္ကေတ ဖြစ်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုအဖြူစင်း များသည် ဆီးတွင် ပါသွားသော အသားဓာတ်များကို ကျောက်ကပ်က ပြန်လည် စုပ်ယူမထား နိုင်ခြင်း သင်္ကေတ ဖြစ်သည်ဟု ဒေါက်တာ အော့စတိက ဆိုပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ခန္ဓာကိုယ်သည် အသားဓာတ် ထိန်းသိမ်း ထားနိုင်မှုထက် ဆုံးရှုံးမှုက ပိုများနေကြောင်း၊ ကျောက်ကပ်များ လုပ်ဆောင်မှု အားနည်း နေကြောင်းကို ညွှန်ပြခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဆရာဝန်နှင့် ပြသကာ ဆီးစစ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ညွှန်ပြနေသော အမှတ်အသားဟု ဆိုရမည် ဖြစ်သည်။
(၂)ချိုင်း တစ်ခါတရံ ချိုင်းတွင် ကြမ်းတမ်းသော အမည်းကွက်များ မြင်တွေ့ရလေ့ ရှိပါသည်။ နေရောင်ဒဏ်ခံ အဆီ သုတ်လိမ်း ထားခြင်း ကြောင့်မဟုတ်ပါက ထိုသင်္ကေတသည် ဆီးချို၊ သွေးချို ရောဂါရှိနေခြင်း သင်္ကေတဖြစ်နိုင်သည်ဟု Web MD's Chief Editor ဒေါက်တာ မိုက်ကယ်စမစ်က ဆိုပါသည်။ သွေးထဲတွင် အင်ဆူလင် အမြောက်အများ ရှိနေခြင်းသည် အရေပြားဆဲလ် များကို လျင်မြန်စွာကွဲပြားစေပြီး တစ်ရှုးနှင့်မယ်လနင် ဓာတ်ဖြစ်ပေါ်နှုန်း မြင့်မား စေပါသည်။ ထိုအခါ အရေပြားသည် ကြမ်းတမ်းပြီး ပိုမည်းလာပါသည်။ အများအားဖြင့် ချိုင်းကြား၊ လည်ပင်း၊ ပေါင်ခြံများတွင် အမည်းကွက်များ တွေ့ရတတ်သည်ဟု ဒေါက်တာ မိုက်ကယ် စမစ်က ဆိုပါသည်။ ထို့ကြောင့် ချိုင်းတွင် ကြမ်းတမ်းသော အမည်းကွက်များ တွေ့ရပါက ဆီးချို၊ သွေးချိုရောဂါ ရှိမရှိကို စစ်ဆေးသင့်ကြောင်း အကြံပြုပါသည်။ ဆီးချို၊ သွေးချိုရောဂါသည် ရောဂါဖြစ်ပွား နေကြောင်းကို အများအားဖြင့် မသိရှိကြသော ရောဂါဖြစ်သည်။
(၃)မျက်ခွံ၊ ဒူးခေါင်းနှင့် တံတောင်ဆစ် မျက်ခွံ၊ ဒူးခေါင်းနှင့် တံတောင်ဆစ် တို့တွင် သေးငယ် ပျော့ပြောင်းသော အဖြူရောင်(သို့မဟုတ်) ဝါကျင်ကျင် အလုံးလေးများ တွေ့ရလျှင် သတိထား သင့်သည်ဟု ဒေါက်တာ စမစ်က ဆိုပါသည်။ ထိုအလုံး ကလေး မျာကိုလည်း တွေ့ရ၊ တစ်ချိ်န်တည်း မှာပင် ခန္ဓာကိုယ်တွင် ကိုလက်စထရော ပမာဏလည်း မြင့်တက်နေပါက အသက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်သော နှလုံးရောဂါ၏ လက္ခဏာ ဖြစ်သည်။ ထိုလက္ခဏာကို သိရှိ မြင်တွေ့ရပါက ကျွမ်းကျင်သူ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင် ဆွေးနွေး သင့်သည်ဟုလည်း ဒေါက်တာ စမစ်က ဆိုထား ပါသည်။
(၄) ဦးရေပြား ဦးရေပြား အရေခွံများ ကျွတ်နေသည်ကို တွေ့ရပါက ထိုလက္ခဏာသည် စိတ်ဖိစီးမှု၏ လက္ခဏာ ဖြစ်သည်ဟု ဒေါက်တာစမစ်က ဆိုပါသည်။ ပြင်းထန်သော စိတ်ဖိစီးမှုသည် ခန္ဓာကိုယ်မှ ကော်တီဆုန်း ဟော်မုန်းကို အများအပြား ထွက်စေသည်။ ကော်တီဆုန်း ဟော်မုန်းသည် ကိုယ်ခန္ဓာခုခံအားနှင် ဇီဝ လုပ်ဆောင်မှုတို့ကို ပျက်ပြားစေသည့် အပြင် ဦးရေပြားကိုလည်း သွေ့ခြောက်စေသည်။ ဦးရေပြား သွေ့ခြောက်ပြီး အရေခွံများ ကျွတ်ခြင်းသည် ဗောက်ပျောက်စေသော ခေါင်းလျှော်ရည်များ သုံးစွဲခြင်းဖြင့် ခေတ္တ ပျောက်ကင်း စေနိုင်သော်လည်း လုံးဝ ပျောက်ကင်း သက်သာစေရန်မူ ဝလင်စွာအိပ်စက်ခြင်း၊ အသက် ပြင်းပြင်းရှုရှိုက်ခြင်း၊ အလုပ်မှ ခေတ္တအနားယူခြင်း တို့ပြုလုပ်ရန် လိုအပ် ပါသည်။
(၅)ဝမ်းဗိုက် အမျိုးသမီးများတွင် ဆီးခုံ အောက်ဖက်ပိုင်း၌ အမွေးနုများ ပေါက်လေ့ရှိသည်မှာ သဘာဝပင် ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် အမွေးနုများ မဟုတ်ဘဲ အမွေးကြမ်းများ ဆီးခုံ တစ်လျှောက်တွင် မကဘဲ ဝမ်းဗိုက် အပေါ်ထိပါ ပေါက်လာပါက မျိုးဥအိမ်တွင် အရည်အိတ် များစွာ ဖြစ်ပေါ် ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂါလက္ခဏာစုထဲမှ တစ်ခုဖြစ်နိုင်ကြောင်း တက္ကဆက် ဆေးတက္ကသိုလ် သားဖွားနှင့် မီးယပ်ဌာန ဒေါက်တာ ပါမာ လဘီရင်က ဆိုပါသည်။ ကျားဟော်မုန်း အများအပြား ထုတ်လုပ်မှုကြောင့် သွေးဆင်း များခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန် တိုးခြင်း၊ ဝက်ခြံပေါက်ခြင်း၊ ဝမ်းဗိုက်၊ မျက်နှာ၊ ရင်ဘတ်နှင့် နောက်ကျော များတွင် အမွေးကြမ်းများ ပေါက်ခြင်း တို့ဖြစ်ပေါ် တတ်ပါသည်။ ထိုရောဂါ လက္ခဏာများ ဖြစ်ပေါ်နေသော အမျိုးသမီး(၁ဝ)ဦးတွင် (၅)ဦးသည် မျိုးမပွား နိုင်ခြင်းနှင့် နှလုံးရောဂါ ကဲ့သို့သော ရောဂါ အန္တရာယ်များ ကြုံတွေ့ ရတတ်ပါသည်။ ထိုလက္ခဏာများ ဖြစ်ပေါ်ပါက သားဖွားနှင့် မီးယပ်ဆရာဝန်နှင့် ပြသသင့်ပြီး ဟော်မုန်း ပမာဏ ထိန်းညှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
(၆)လျှာ လျှာသည် ပုံမှန်အရောင် အဆင်းမဟုတ်ဘဲ အဖြူရောင် ဆေးသုတ်ထား သကဲ့သို့ ဖြူဆွတ်ဆွတ် ဖြစ်နေပါက အိပ်မောကျနေစဉ် အတွင်း အစာအိမ်မှအစာများ နောက်ပြန် ဖိတ်စင်မှုကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ဒေါက်တာဖရိုင် ဟိုမာက ဆိုသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် အစာမျိုပြွန် အောက်ခြေရှိ တစ်ဖက်ပွင့် အဆို့ရှင်သည် အစာအိမ် အတွင်းသို့ ရောက်ပြီးသောအစာများကို နောက်ပြန် မဖိတ်စင်အောင် ပြုလုပ်ပေးသည်။ ထိုအဆို့ရှင် မလုံသောအခါ အစာခြေ အက်ဆစ်များ ခံတွင်း ဘက်သို့နောက်ပြန် ဖိတ်စင်သောကြောင့် လည်ချောင်းကွဲပြီး လျှာမှာ လည်း အက်ဆစ်များဖြင့် ဖုံးအုပ်နေကာ အဖြူရောင်ဖြစ်၍ ခံတွင်းနံ့ လည်း ဆိုးရွားနေ ပါလိမ့်မည်။ ထိုရောဂါ လက္ခဏာကို ပျောက်ကင်းစေရန် အက်ဆစ် ပြေဆေး သောက်သုံးခြင်း၊ (သို့မဟုတ်)အက်ဆစ်များသော အစား အစာ၊ ပူစပ်သော အစားအစာတို့ကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြင့် ကုသနိုင် ပါသည်။ မသက်သာပါက ဆရာဝန်နှင့် ပြသရန် လိုအပ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ် အတွင်းမှ အက်ဆစ် ထုတ်လုပ်မှု လျှော့ချရန် ဆေးဝါးများ သောက်သုံး သင့်ပါသည်။
(၇)မျက်စိ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ရုတ်တရက် မျက်ကွင်း ညိုလာတတ်ပါ သည်။ မျက်ကွင်း ညိုရခြင်းတွင် အကြောင်းအရင်း များစွာ ရှိတတ်ပါသည်။ ညဉ့်နက် သန်းခေါင် တိုင်အောင် အလုပ်လုပ်ရသော အခါတွင် လည်း မျက်ကွင်း ညိုတတ်ပါသည်။ ထိုသို့မဟုတ်ပါလျှင် ရုတ်တရက် မျက်ကွင်း ညိုလာမှုသည် ဓာတ်မထည့်မှုကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ လူ့ ခန္ဓာကိုယ်သည် ဓာတ်မတည့် ပစ္စည်းနှင့် တွေ့ဆုံပါက ဟစ္စတမင်း ဟူသည့် ဓာတုပစ္စည်း တစ်မျိုး ထွက်ရှိပါသည်။ ထိုဓာတုပစ္စည်းသည် သွေးကြောများကို သွေးနှင့် အခြား အရည်များဖြင့် ဖောရောင်စေပြီး အရေပြား၏ အပါးလွှာ ဆုံးနေရာတွင် အမည်းကွက်များ ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ထိုသို့ မျက်ကွင်းညို လာပါက အရေပြားဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် မျက်ကွင်းညိုခြင်း ဖြစ်စေသော ဓာတ်မတည့်သည့် ပစ္စည်းကို သိရှိ ကုသနိုင်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် မျက်သားအဖြူပေါ်၌ အနည်းငယ်ကြွတက် နေသော အဖုလေး တွေ့ရ တတ်ပါသည်။ သာမန်အားဖြင့် အန္တရာယ်မရှိသော မျက်သား တက်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ နေရောင်၊ လေ၊ ဖုန်မှုန့်များကြောင့် ဆက်သွယ်တစ်ရှုးများ အလွန်အမင်း ကြီးထွား လာခြင်းဖြစ် သည်ဟု မျက်စိ အထူးကု ဒေါက်တာ ထရေစီဂိုး စတိန်းက ဆိုပါသည်။ ထိုအဖုလေး ဆက်လက် ကြီးထွား မလာစေရန် မျက်စိစိုစွတ် နေစေမည့် မျက်စဉ်းကို အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပြီး အပြင်ထွက်လျှင် နေကာ မျက်မှန်တပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ နံနက်ခင်း မျက်နှာသစ်ပြီး ချိန်တိုင်းတွင် မျက်ခုံးမွေးနှုတ်ရုံ၊ ဝက်ခြံညှစ်ရုံ သာမပြုလုပ်ဘဲ မိမိခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းများကို ကြည့်ရှု စစ်ဆေး ပေးခြင်းဖြင့် အရေးကြီးသော ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ သတင်း အချက်အလက်များကို ရှာဖွေ ကြည့်နိုင် ကြပါစေ။
Fwd: ရေးသားသူ — ဇော်လင်းမြင့် (ဆေး/မန်း) မြ၀တီ
အအေးမိရင်..ဘာတွေ လုပ်သင့် သလည်း။..နာဖာချေး အကြောင်း သိကောင်းစရာ...
မေး။ ။ ဒေါက်တာခင်ဗျာ... ကျွန်တော့်ရုံးမှာ အများစုက အအေးမိ နေကြပုံပေါ်ပါတယ်။ ရုံးကလည်း Air Con ရုံးဆိုတော့ တစ်ရုံးလုံး နှပ်တရှုပ်ရှုပ်နဲ့ အလုပ်လုပ်ပေါ့ ဆရာရယ်။
ကျွန်တော်သိလိုတာက အအေးမိတာ အမြန်ဆုံး ပြန်ကောင်းဖို့ ဘာလုပ်သင့်လဲ ဆိုတာပါ။ အအေးမိတယ်ဆိုတဲ့ လက္ခဏာကိုရော ဘယ်လို သိနိုင်မလဲဆရာ။ အအေးမိရင် ဘာတွေ လုပ်သင့်လဲ။ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် ပြောပြပေးပါ။
ဖြေ။ ။ နှာခေါင်းနှင့် လည်ချောင်းအတွင်း ပိုးဝင် ပျံ့နှံ့တတ်သော အအေးမိ ရောဂါကတော့ ခုလိုကူးစက်ရောဂါ ကူးလွယ်၊ ဖြစ်လွယ်တဲ့ ရာသီမှာ အဖြစ်များကြပါတယ်။ နှာစေး၊ ချောင်းဆိုးသူက တစ်ဆင့် အနီးအနားကလူကို ကူးစက်စေပြီးနှာပိတ် သို့မဟုတ် နှာရည်ယိုခြင်း၊ နှာချေခြင်း၊ နှာပိတ်၍ အနံ့ခံ အာရုံချို့တဲ့ခြင်း၊ ခံတွင်းပျက်ခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ ချောင်းခြောက်ဆိုးခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ကိုယ်နွေးခြင်း (အနည်းငယ်ဖျားခြင်း) စတဲ့ လက္ခဏာတွေ ပေါ်တတ်ပါတယ်။ အအေးမိရောဂါဟာ တစ်ပတ်အတွင်း အလိုအလျောက် ပြန်လည် ကောင်းမွန်လေ့ရှိတဲ့ ရောဂါပါ။ အအေးမိလာပြီ ဆိုရင်တော့ စွပ်ပြုတ်၊ ကြာဆံပြုတ်တို့လို အရည်ပူပူကို သောက်ပေးပါ။ တစ်နေ့ ရေရှစ်ဖန်ခွက်ခန့် သောက်ရပါမယ်။ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး၊ အအေးမိ၊ နှာစေး၊ ချောင်းဆိုး ပျောက်ဆေးတွေ သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ နှာပွင့်စေရန် ရေနွေးငွေ့ ရှူနိုင်ပါတယ်။ ပါရာစီတမော သောက်နိုင်ပါတယ်။
ဈေးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ အအေးမိတုပ်ကွေး အဖျား ပျောက်ဆေးတွေထဲမှာ အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေး၊ နှာပွင့်ဆေး၊ နှာစေးပျောက်ဆေးတွေ တစ်ပါတည်း ပါဝင်တတ်လို့ ဆေးပမာဏ လွန်ခြင်းမဖြစ်ရန် တခြား အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေးတွေနဲ့ တွဲဖက် မသောက်သုံးသင့်ပါ။ စိတ်ငြိမ်ဆေး သောက်သုံးသူ ဆိုရင်လည်း အဆိုပါ အအေးမိ၊ တုပ်ကွေးပျောက်ဆေးတွေ ကို ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ သွေးတိုး၊ နှလုံး၊ ဆီးချိုရှိ သူတွေဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီးမှ ဆေးသောက် သုံးသင့်ပါတယ်။ ချောင်းဆိုး၊ နှာစေးနေသူ ဖြစ်တာကြောင့် မီးခိုးဖုန်ထူတဲ့ နေရာတွေ ကို ရှောင်ရှားပေးပါ။
အအေးမိသူတွေ အတွက်ကတော့ အရေးကြီးဆုံးက အရည်များများ သောက်ပေးဖို့ပါ။ ဖျားပြီလို့သိတာနဲ့ တစ်ရက်ခန့် ကောင်းမွန်စွာ အနားယူသင့်ပြီး ဓာတ်ဆားရည်များများ သောက်ပေးသင့်ပါ တယ်။ အာဟာရဖြစ်ပြီး အရည်များများပါတဲ့ ကြက်စွပ်ပြုတ်ရည်၊ ကြက်ပေါင်း ရည်တွေသောက်ရင် အားအင်လည်း ပြန်ပြည့် နိုင်သလို ကိုယ်ခံအားလည်း ပြန်တက်တာကြောင့် အဖျားဒဏ်ကို အမြန်ဆုံး ချေမှုန်းနိုင်ကြောင်းပါ။ (နှာခေါင်း အလွန်အမင်းပိတ်ရင် ရနွေးကျိုက်ကျိုက် ဆူနေတဲ့ထဲကို ပရုတ်ဆီ ထည့်ရှူနိုင်ပါတယ်။ လည်ချောင်းအတွက် ပျားရည် သို့မဟုတ် သံပရာရည်ကို ရေနွေး နဲ့ ဖျော်သောက်နိုင်ပါတယ်။)
Air Con ရုံးဖြစ်တာကြောင့် ရောဂါကူးစက်မှု ပိုမိုလွယ်ကူ မြန်ဆန် စေနိုင်သလို အအေးမိသူ အတွက်လည်း ပိုမို အအေးမိစေဖို့ လွယ်ကူစေပါတယ်။ မလိုအပ်တဲ့ နေရာမှာ Air Con မဖွင့်ဘဲ သဘာဝလေဖြင့် နေထိုင်ခြင်းကို ပြုလုပ်ပေးပါ။
သို့မဟုတ် အကင်းမပြတ် အဖျားရှိနေသူများ နေထိုင်ရန် Air Con မရှိတဲ့ ကောင်းမွန်သော နေရာ တစ်နေရာ သတ်မှတ်ပြီး ဖြေလျှော့မှုပေးပါ။
မေး။ ။ ဒေါက်တာရှင့်... နားဖာချေး မထွက်အောင် လုပ်လို့ ရပါသလား။
နားမသန့်စင်လို့ အလှပျက်မှာ ပိုစိုးရိမ်မိပါတယ်။ သမီးသိလိုတာက နားဖာချေးဆိုတာ မထုတ်ရင် ပိတ်သလားဆရာ။ မထုတ်လို့ရော မရဘူးလားဆရာ။ နောက်ပြီး နားဖာချေး အလိုအလျောက် ထွက်လာစေတဲ့ ဆေးရည်တွေကိုရော သုံးသင့်ပါသလား။
ဖြေ။ ။ နားဖာချေး ကြောက်တတ်တဲ့ သမီးမိချောရေ... နားဖာချေးတို့ မည်သည် နားထဲမှာ အလိုအလျောက် ဖြစ်လေ့ရှိပြီး တချို့က အလိုအလျောက် ကွယ်ပျောက် သွားလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နားဖာချေးတွေ များလာရင်တော့ စုခဲခြောက်သွေ့ပြီး နားထဲမှာ ပြည့်လာတာကြောင့် နားဖာချေးကြောင့် အကြားအာရုံ မရှင်းလင်းတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နားဖာချေး ပိတ်နေရင် နေရခက်ပြီး ကသိကအောက် ဖြစ်ခြင်း၊ နားယားခြင်း၊ နားပူခြင်း၊ မူးဝေခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်တာကြောင့် လူအများစုဟာ ဂွမ်းတုတ် တံလေးများဖြင့် နားဖာကလော်ကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
နားဖာချေး ပိတ်လာရင် မိမိဘာသာ ဖယ်ထုတ်ရမှာ ကြောက်သူဆိုလျှင်တော့ နားဆရာဝန်နှင့် တွေ့ပြီး နားသန့်သွားအောင် ဖျော်ချနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် နားဖာ ချေးနူးအောင် ဆောင်ရွက် ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဂွမ်းတုတ် တံမသုံးဘဲ နားဖာချေးနူးစေတဲ့ သံလွင်ဆီ သို့မဟုတ် ဆိုဒီယမ် ဘိုင်ကာဗွန်နိတ် အစက်ချဆေးတို့ကို ထည့်နိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန် ညွှန်ကြားတဲ့ နားဖာချေး ပျော်ဆေး အစက်ချဆေးကိုလည်း ထည့်နိုင်ပါတယ်။ နားဖာချေး ပျောက်ဆေးတွေ အနေနဲ့ Ear Clear (ကာဘာမိုဒ် ပါအောက်ဆိုဒ်) ရှိပါတယ်။ နားဖာချေး နူးပျော့ ဆေးထည့် နည်းကတော့ ခေါင်းကို တစ်ဖက်စောင်းပြီး နားတစ်ဖက် တစ်ချက်စီ ထည့်ရမှာပါ။ နေ့စဉ်ထည့်ဖို့မလိုဘဲ ရက်ခြားထည့်ရပါတယ်။ နားဖာချေးပျော်ဆေးကြောင့် နားထဲမှာ ပလုံစီ ထသလို ခံစားရခြင်း၊ နားထဲ မရိုးမရွဖြစ်ခြင်း ဆိုတဲ့ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးခံစား ရနိုင်ပါတယ်။ နားထဲထည့်မယ့် ပုလင်းကိုလည်း သန့်စင်စွာ ထားသိုပြီး သန့်စင်တဲ့ လက်နဲ့ ထည့်ရမှာပါ။
သတိပြုရမယ့် အရေးကြီးဆုံး အချက်ကတော့ နားတွင်း ရောင်ရမ်း ကိုက်ခဲခြင်း၊ နားစည် မှေးပေါက်ခြင်း၊ နားရောဂါဟောင်း ရှိခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်ရင်တော့ အဆိုပါ ဆေးတွေကို မသုံးဖို့ပါ။ ဆေးဆိုင်မှာ ဝယ်စဉ်ကတည်းက အစက်ချပြွန်ကို တောင်းယူပါ။ နားဖာချေးခြောက် နူးပျော်လာစတွင် နားပို ပိတ်တတ်ပါတယ်။
ဆိုဒီယမ် ဘိုင်ကာဗွန်နိတ် အစက်ချဆေးက တန်းသုံးနိုင်ပေမဲ့ သံလွင်ဆီကျတော့ ခံနိုင်ရည်ရှိမယ့် အပူချိန်ရောက်အောင် ရေနွေးစိမ်ပြီးမှ သုံးရမှာပါ။ ပိတ်နေတဲ့ နားဘက်ကို ခေါင်းစောင်းပြီး အဆီသုံး၊ လေးစက်ချပါ။ ဆယ်မိနစ်ခန့် ထိုပုံစံအတိုင်း နေပါ။တစ်နေ့ သုံးကြိ်မ်လောက် ထည့်ရပါတယ်။ နားဖာချေးခြောက် နူးဆေး၊ ပျော်ဆေးတွေမှာ ဟိုက်ဒရိုဂျင် ပါအောက်ဆိုဒ်တွေပါလို့ နားပေါက်ထဲက အနားသားတွေကို လောင်စေလို့ သတိပြုပါသမီးငယ်။
by- Myawaddy Health
လည်ချောင်းနာခြင်း သက်သာစေမည့် အိမ်တွင်းနည်း ၁၀ နည်း
လည်ချောင်း နာနေသလား၊ လည်ချောင်း နာနေချိန်မှာ အမြန် သက်သာစေမယ့်
လွယ်ကူတဲ့ အိမ်တွင်း ကုထုံးတွေကို လိုက်နာပေးမယ် ဆိုရင် အမြန်ဆုံး သက်သာ
လည်ချောင်းနာနေတဲ့ အချိန်မှာ ပြည့်ပြည့်ဝဝ အနားယူပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အနားယူနေစဉ် အတောအတွင်း ရေနဲ့ သစ်သီးဖျော်ရည်လို အရည်ကို အများအပြား
(၂) ဆားရေနွေးဖြင့် ပလုတ်ကျင်းပါ
လည်ချောင်းနာနေတဲ့အခါ အာခေါင်ထဲအထိ ရောက်အောင် ဆားရေနွေးနဲ့
ပလုတ်ကျင်းပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြုလုပ်နည်းမှာ ရေတစ်ဖန်ခွက်ထဲကို ဆား
လက်ဖက်စားဇွန်း တစ်ဇွန်းထည့်ပြီး ဖျော်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လည်ချောင်းနာ ပျောက်စေမယ့် ငုံဆေး (Lozenges) ကို ငုံပေးရင်
(၄) အခန်းတွင်း လေထု နွေးထွေးနေပါစေ
အေးမြနေတဲ့ အချိန်မှာ အခန်းတွင်း ရာသီဥတု နွေးထွေးနေအောင် ထားပါ။ ဒါဟာ
အသက်ရှူ လမ်းကြောင်းအတွင်း ရောင်ရမ်းမှုနဲ့ နာကျင်မှုကို သက်သာစေပါတယ်။
(၅) ပျားရည်ထည့်ထားသော လက်ဖက်ရည်ကြမ်း သောက်ပါ
ပျားရည်ခတ်ထားတဲ့ လက်ဖက်ရည်ကြမ်း သောက်သင့်ပါတယ်။ ဒီအိမ်တွင်း ကုထုံးဟာ
လူအများစုကို သက်သာစေပြီး ခန္ဓာကိုယ် အရည်ဓာတ် ပိုရောက်ရှိစေတဲ့နည်း
ရေနွေးငွေ့ရှူတာက လည်ချောင်းနာတာကို သက်သာစေတဲ့နည်းပါ။ ရေနွေးငွေ့ကို
ပါးစပ်နဲ့ နှာခေါင်းကို သုံးပြီးအချိန် ငါးမိနစ်ခန့် ခပ်ပြင်းပြင်း
ရှူပေးပါ။ တစ်နေ့တာအတွင်း အကြိမ်များစွာ လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ရေနွေးပူ
မလောင်အောင် သတိထားဖို့တော့ လိုပါတယ်။
ပူနွေးတဲ့ ကြက်စွပ်ပြုတ် တစ်ခွက်ကို သောက်ပေးတာက လည်ချောင်းနာတာကို
သက်သာစေတဲ့အပြင် အအေးမိချင်သလိုလို ခံစားနေရတဲ့ နွမ်းနယ်ပင်ပန်းမှု
နွေးနွေးထွေးထွေးနေပြီး အိပ်ရေးဝဝ အိပ်စက် အနားယူတာကြောင့်လည်း
လည်ချောင်းနာတာ သက်သာသွားစေ နိုင်ပါတယ်။
လည်ချောင်း နာကျင်နေခိုက်မှာ ရေခဲရေနဲ့ ရေခဲပါတဲ့ အစားအသောက်တွေကို
တတ်နိုင်သမျှရှောင်ပြီး သွားနဲ့ခံတွင်း သန့်ရှင်းရေးကိုပါ
(၁၀) အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး သောက်ပါ
လည်ချောင်းနာကျင်မှုနဲ့အတူ ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုလုံး ကိုက်ခဲနာကျင်နေရင်
နာကျင်မှု သက်သာစေဖို့ ပါရာစီတမော၊ အိုင်ဗျူပရိုဖန် စတဲ့ အကိုက်အခဲ
အသက်အရွယ် မရွေး အမျိုးသမီး များ လေ့ကျင့် နိုင် သည့် သားအိမ် လေ့ကျင့်ခန်းများ
ပျိုမေ တိုင်း လေ့ကျင့် ရမည့် နည်းလမ်းကောင်း (၅ ) သွယ်.......
ပျိုပျို အိုအို အရွယ်စုံ အမျိဲုးသမီးတိုင်း အတွက် အကျိုးကျေးဇူး ရရှိစေမယ့် သားအိမ်လေ့ကျင်ခန်း တချို့ကို ဖော်ပြ မှာ ဖြစ်ပါ တယ်..ဒီ နည်းလမ်းတွေ ကို GINGER GYM မှ နည်းပြ မစွဲမြတ်ဟေသီ က ပြသပေးခဲ့ပါတယ်....အထောက်အကူပြု ကိရိယာ မပါ ဘဲ လေ့ကျင့်နိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အိမ်မှာဘဲနေနေ ခရီးဘဲသွား သွား လေ့ကျင့်ရ အဆင်ပြေစေပြီး ငွေကုန်ကြေးကျ သက်သာစေ တာ မို့ လေ့ကျင့်ကြည့်ပါအုံးနော်....
နည်းလမ်းကောင်း ( ၁ ) A . ပုံ မှာ မြင်တွေ့ရတဲ့ အတိုင်း ပက်လက်လှန်အိပ်ပြီး ဒူးထောင် ထားပါ ။ B . လက်နှစ်ဘက် ကို ခါးအောက်မှ ပင့်မပြီး ခြေဖျားထောက် ကာ ခန္ဓာကိုယ် ကို ကော့နိုင်သမျှ အဆုံးထိ ကော့ထားပါ ။ စိတ်ကို မွေးလမ်းကြောင်း ကြွက်သားပေါါ်မှာ အာရုံ စူးစိုက်ထားပြီး ၄င်းကြွက်သားကို အဆုံးထိ ကျုံ့ထားပေးပါ ။ အဲဒီ အနေအထားအတိုင်း ကို စိတ်မှတ်ဖြင့် (၁) မှ ( ၃၀ ) အထိ ရေတွက်ပြီး နေပါ ။ C. ပြီးလျှင် ခြေဖျားထောက်ထားရာမှ ဖနောင့်ပြန်ချပြီး ခန္ဓာ ကိုယ် ကို ကော့နိုင်သမျှ အဆုံးထိ ကော့ထားပါ ။ စိတ်ကို မွေးလမ်းကြောင်း ကြွက်သားပေါ်မှာ အာရုံစူးစိုက်ထားပြီး ၄င်းကြွက်သားကို အဆုံးထိ ကျုံ့ထားပေးပါ ။ အဲဒီအနေအထား မှာ လည်း စိတ်မှတ်ဖြင့် (၁) မှ ( ၃၀ ) အထိ ရေတွက်ပြီး နေပါ ။ အားလုံးပြီး လျှင် အစအဆုံး တစ်ကြော့ပြန် စ ပါ ။ ဤသို့ လေ့ကျင့်ခြင်း ကို ( ၅ ) ကြော့ မှ ( ၁၀ ) ကြော့ အထိ ပြုလုပ်ပေးပါ ။
နည်းလမ်းကောင်း ( ၂ ) A . ပုံပါ အနေအထားအတိုင်း ခြေတစ်ဘက် ကို ရှေ့ဘက် မှာ ၉၀ံကျအောင် ဒူးကွေးထားပြီး ကျန်ခြေတစ်ဘက် ကို အနောက်ဘက်သို့ ကွေးထားပါ ။ B . အရှေ့ဘက် မှာ ကွေးထားတဲ့ ဒူး ကို ၉၀ံဒီကရီ အတိုင်း ပုံမပျက် စေဘဲ ကိုယ် ကို ရှေ့သို့ကိုင်းချပါ ။ ကိုင်းချချိန်မှာ နောက်ခြေကို ခန္ဓာကိုယ် နှင့် တတန်းထဲ ဖြောင့်နေအောင်ဆန့် ထားပါ ။ လက်နှစ်ဘက် ကို ရှေ့သို့ ဆန့်တန်းပြီး နှဖူး နှင့် ကြမ်းပြင် ကို ထိထားပါ ။ နှဖူး ကို ကြမ်းပြင် သို့ထိရာမှာ စိတ်ကို လျှော့ထားပြီး တဖြေးဖြေးချင်း သွားထိပေးးပါ ။ စိတ် အာရုံ ကို မွေးလမ်းကြောင့်း ကြွက်သားမှာ စူးစိုက် ထားပြီး ၄င်းကြွက်သား ကို ကျုံ့ထားပါ ။ အဲဒီ အနေအထားအတိုင်း စိတ် မှတ်ဖြင့် ( ၁ ) မှ ( ၃၀ ) အထိ ရေတွက်ပြီး နေပါ ။ ပုံမှန်အနေအထားသို့  ပြန်သွားရာမှာလည်း စိတ်ကို လျှော့ထားပြီး ဦးခေါင်းကို တဖြေးဖြေးချင်း ပြန်ထပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ ဤ သို့လေ့ကျင့်ခြင်း ကို ဘယ်ခြေ ညာခြေ ပြောင်းပြီး ငါးကြိမ်စီ လေ့ကျင့်ပေးပါ ။ သားအိမ် အတွက် ကောင်းမွန်စေရုံသာ မက ပုခုံး ၊ တင်ပါး ၊ ပေါင်တံ များ ကို လည်း အကြောပြေလျော့စေ မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
နည်းလမ်းကောင်း ( ၃ ) A . ခန္ဓာကိုယ် ကျောဘက်ကို ကြမ်းပြင်မှ ၄၅ံ ဒီဂရီ အကွာထားပြီး ခပ်လျောလျော အနေအထားထိုင်ပါ ။ လက်နှစ်ဘက် ကို ခပ်ဖျော့ဖျော့ ထားပြီး ယှက်ထားပါ ။ B . ခြေထောက် ၂ ဘက် ကို ကြမ်းပြင်နှင့် မထိစေဘဲ ရှေ့ သို့ ကွေးလိုက်ဆန့်လိုက် ပြုလုပ်ပေးပါ ။ C . ခြေ နှစ်ဘက် ကို ရှေ့သို့ ဆန့်ချိန်တွင် ကျောဘက်သည် ကြမ်းပြင်မှ ၃၀ဲဒီဂရီ အကွာမှာ ရှိနေရမှာ ဖြစ်ပြီး ခြေကွေးလိုက်ချိန်တွင် ၄၅ံ ဒီဂရီ အကွာ မှာ ရှိနေရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဤ နည်းလမ်း ကို လေ့ကျင့်ရာမှာ စိတ်မှတ်ဖြင့် ( ၁ ) မှ ( ၃၀ ) အထိရေတွက်ပြီး ( ၃၀ ) ပြည့်လျှင် တကြော့ ဟု သတ်မှတ်ကာ ( ၅ ) ကြော့ လေ့ကျင့်ပေးပါ ။ သားအိမ် ကို ၀ပ်စေပြီး ၀မ်းဗိုက် ကို လည်း ချပ်ရပ်လှပစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
နည်းလမ်းကောင်း ( ၄ ) A . ခန္ဓာကိုယ် ကျောဘက်ကို ကြမ်းပြင် မှ ၃၀ံ ခန့် အကွာမှာထားပြီး လက်နှစ်ဘက် ကို ဘေးဘက်မှာ ခပ်ဆန့်ဆန့်ထားပါ ။ လက်နှစ်ဘက် ကို ကြမ်းပြင်သို့ မထောက်ထားရပါ ။ B .ခြေ နှစ်ဘက် ကို လည်း ကြမ်းပြင်သို့ မထိစေဘဲ စက်ဘီး နင်းသလို အနေအထားအတိုင်း လေ့ကျင့်ပါ ။ ဤနည်းလမ်းကို လေ့ကျင့်ရာမှာ စိတ်မှတ်ဖြင့် ( ၁ ) မှ ( ၃၀ ) အထိ ရေတွက်ပြီး ( ၃၀ ) ပြည့် လျှင် တစ်ကြော့ဟု သတ်မှတ်ကာ ( ၅ ) ကြော့ လေ့ကျင့်ပေးပါ ။သားအိမ် ကို ၀ပ်စေပြီး ၀မ်းဗိုက် ကိုလည်း ချပ်ရပ်လှပစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
နည်းလမ်းကောင်း ( ၅ ) A. ပုံမှာ တွေ့ရသည့် အတိုင်း ကြမ်းပြင် မှာ တတောင် ချ ထိုင်ပြီး မျက်နှာကို ပုံမှန်ထားပါ ။ B . ရှေ့ချထားတဲ့ လက်နှစ်ဘက် ကို ရှေ့သို့ ( ၄ ) လှန်း အထိ ဆန့်ထုတ်ပါ ။ C . ဆန့်ထုတ်ထားသည့် လက်ကို အားပြုပြီး ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုလုံးကို ရှေ့သို့ဆန့်ထုတ်ပါ ။ ခန္ဓာ ကိုယ် ကို ဆန့်ထုတ် ချိန်တွင် မွေူးလမ်းကြောင်း ကြွက်သားကို ကျုံ့ထားပါ ။ D. ဆန့်ထုတ်ထားတဲ့ ခန္ဓာ ကိုယ် ကို ကြမ်းပြင်နှင့် တသားထဲဖြစ်အောင် ၀ပ်ချလိုက်ပြီး စိတ်မှတ်ဖြင့် ( ၁ ) မှ ( ၁၀ ) အထိ ရေတွက်ပြီးနေပါ ။ ပြီးလျှင် အစ မှ ပြန် စ ပါ ။ ( ၅ ) ကြော့ ပြုလုပ်ပေးပါ ။
နည်းလမ်းလေးတွေကို လေ့ကျင့်ခြင်း အားဖြင့် အပျိုဖော်ဝင် စ မှ သွေးဆုံးချိန် အထိ မီးယပ်နှင့် ပတ်သက်တဲ့ ဝေဒနာတွေ ကို သက်သာ ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ် ။ ဓမ္မတာ မမှန်ခြင်း ၊ ဓမ္မတာ ကြောင့် နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း ၊ စိတ်တို စိတ်ဆတ် စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း ၊ အ၀လွန်ပြီး လရှည်ကြာစွာ မီးယပ်ထိန်ခြင်း ၊သွေးဆုံးကိုင်ခြင်း အစရှိသော ဝေဒနာ များကို ဖယ်ရှားနိုင်ပြီး သွေးသားမှန်ကန် လှပလာစေမှာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အကြံပြု တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
အန်ခြင်းနှင့် ဝမ်းသွားခြင်း ........
ဒီပြဿနာတွေဟာ အတူတူတွဲပြီး ဒါမှမဟုတ် သီးခြားစီဖြစ်တတ်ပြီး များသောအားဖြင့် အစာခြေစနစ်မှာ ပိုးဝင်တာကြောင့်ပါ။ ဒီပြဿနာကြောင့် ရေဓာတ်ခန်းခြောက်နိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နို့စို့ကလေးငယ်နဲ့ အသက်ကြီးသူတွေမှာ အန်တာနဲ့ ဝမ်းသွားတာတစ်ပြိုင်နက် ဖြစ်လာခဲ့ရင်ပါ။
၁။ လူနာကို သက်သောင့်သက်သာ ရှိအောင်ထားပါ
လူနာကို အားပေးပါ။ အန်ဖတ်ကိုခံဖို့ ထွေးခံပေးထားပြီး မျက်နှာသုတ်ဖို့ ပူနွေးစွတ်စိုတဲ့ အဝတ်စ တစ်ခုပေးထားပါ။
အန်တာ သက်သာသွားရင် ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ရေဓာတ်ပြန်လည်ဖြည့်ပေးဖို့ သောက်ရေ ဒါမှမဟုတ် ဓာတ်ဆားရည် များများကို နည်းနည်းနဲ့ မကြာခဏ တိုက်ပေးပါ။
၃။ ဆရာဝန် အကူအညီယူပါ
အန်တာ ဒါမှမဟုတ် ဝမ်းသွားတာ မရပ်တန့်ခဲ့ရင် ဒါမှမဟုတ် လူနာရဲ့ အခြေအနေကို စိုးရိမ်နေရင် ဆရာဝန်နဲ့ ပြပါ။
ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်အောင် ဘယ်လိုကင်မလဲ
- အသားများတဲ့အတုံးကို ရွေးဝယ်ပါ။ မကင်ခင်အဆီများကို ပြောင်နေအောင် ဖယ်ရှားပါ။ အဆီကို မီးလောင်လျှင် ကျပ်ခိုးစွဲခြင်းပိုများ တတ်သည်။
- အသားတုံးကို မီးမကင်မီ ရှာလ ကာရည်နှင့် နယ်ဖတ်ခြင်းဖြင့် ကင် ဆာဖြစ်စေသည့် ဒြပ်ပေါင်းများဖွဲ့ စည်းမှု (၈၈) ရာနှုန်းကျဆင်းစေသည်။
- ငါးသည် အသားထက်အကျက်မြန် သည်။ မီးကင်သည့်အချိန်နည်းလေ လေ၊ ကျပ်ခိုးစွဲသည့်ပမာဏ နည်း လေလေဖြစ်ပြီး ကင်ဆာဖြစ်စေသည့် ဒြပ်ပေါင်းပါဝင်မှုလျှော့ချနိုင်သည်။
- ဟော့ဒေါ့များ၊ ဝက်အူချောင်းများ၊ ယိုးဒယားအသားကင်များရှောင်ပါ။ ကြာရှည်ခံအောင် ထည့်သွင်းထား သည့် ဓါတုပစ္စည်းများကြောင့် ကင် ဆာဖြစ်စေသည့် ကာဗွန်ဓါတ်များ ပိုထွက်လာစေသည်။
- မီးမတောက်ပါစေနှင့်၊ အသားကို မီးမစွဲပါစေနှင့်၊ အသားများအိုးနှင့် မကပ်စေရန် မီးကင်သည့် ဇကာအိုး ကို ဆီသုတ်ပါ။
- ဟင်းရွက်များပါထည့်ကင်ပါ။ ကင် ဆာဖြစ်စေသည့် ဒြပ်ပေါင်းများသည် အသားတုံးများ၌သာ ဖြစ်ပေါ်ပြီး အရွက်များ၏ phytochemical ဒြပ် ပေါင်းများက ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှု လျော့ ကျစေသည်။
- တစ်ခါကင်ပြီးတိုင်း ဇကာကိုပြောင် နေအောင် တိုက်ချွတ်ဆေးကြောပါ။ ဇကာမဆေးဘဲထားလျှင် ကျပ်ခိုးများ ထပ်ကာထပ်ကာစွဲပြီး တစ်ခါကင်တိုင်း ကင်ဆာဖြစ်စေသည့် ဒြပ်ပေါင်းများ စုပုံလာတတ်သည်။
By-Health Digest Journal
Posted by Kay Kay at 11:37 PM
hnin December 15, 2013 at 7:22 PM
သားအိမ် လေ့ကျင့်ခန်းများကို ပုံများနှင့်ဖော်ပြပေးစေချင်ပါတယ် ။ သေချာလုပ်ချင်လို့ပါ ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
yinmin khine May 17, 2015 at 1:39 AM
Most Visit Blog Links
Red Roseof Burma
Shwe Man Maye.
Zwe Nay Lin Tun
င်္Fwd : လက်ရှိကုမ္ပဏီမှာဘယ်လောက်ကြာအောင်လုပ်မှာလဲ ? ? ? ? ? အခန်း(၅)
င်္Fwd : လက်ရှိကုမ္ပဏီမှာဘယ်လောက်ကြာအောင်လုပ်မှာလဲ ? ...
Fwd : လက်ရှိကုမ္ပဏီမှာဘယ်လောက်ကြာအောင်လုပ်မှာလဲ ? ?...
င်္Fwd : လက်ရှိကုမ္ပဏီမှာ ဘယ်လောက်ကြာအောင်လုပ်မှာလဲ ?...
Fwd : ဆရာဝန်နှင့် ပြသရန် လိုလာသည့် ရောဂါလက္ခဏာများ ...
Fwd: "... သူငယ်ချင်း (၈)မျိုး ..."
လင်ကွန်းဧ။် ' မ ' ဆယ်လုံး ....
Fwd : Career Management And Development .....
လုပ်ငန်းခွင်မှာ သင်ဟာ တ်ာတစ်ယောက်ဆိုလျှင် !!!!!!
Fwd : ♥♥ ဘီလ်ဂိတ် ကပေး တဲ့ အကြံဥာဏ် (၁၁) ခု ♥♥
သိထားသင့်တဲ့ အသည်းရောင် ရောဂါများ .......
မိန်းမသားများ အောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းတရား ......